Umakhalekhukhwini Philips Xenium X1560 - kungcono nje encane amandla plant esandleni. Akazange nje has ukusebenza kwebhethri esihle eyenzelwe nezingxoxo ezinde, kungase futhi ashona nezinye Smartphones ngokuxhuma USB yabo uxhumano ikhebula ngqo. Nale divayisi, ungakwazi ngokoqobo bazizwa amandla ezingaba sebhetri.
Ucingo ngaphandle lingatshajwa ingasebenza kufikela kuzinsuku ezingu-100 wesikhathi se-standby, okubonakala Amazing. Ngaphezu kwalokho, okukodwa kungaba ubambe amahora angu-40 ku Imodi inkulumo.
Ikhono ukusebenzisa kanyekanye ezimbili ama-SIM khadi enye inzuzo undoubted zale divayisi. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlela izinto zakho siqu kanye nomsebenzi ngcono kakhulu bese ugcine oxhumana eceleni, usebenzisa zefoni ezihlukene ezimbili. Nge ezimbili-SIM-amakhadi awudingi ukuba baphathe 2 amafoni.
Naphezu kweqiniso lokuthi ifoni Philips Xenium X1560 linikeza izici eziningi eziphambili, isikrini sayo ubukeka kuhle ezikhangayo. Nge ubukhulu encane - 2.4 amayintshi - QVGA-TFT 262k isibonisi ubukeka kahle. Ukubheka izithombe Kwenziwa angabacwasi ngokushesha, futhi izithombe ziboniswa egqamile futhi ezimibalabala. Kulokhu, isikhathi mpendulo yezinhlelo isithombe ngasinye ukulayisha incane. Khombisa Ukulungiswa - 240 x 320 Amaphikseli, abayizigidi ezingu-16 imibala etholakalayo. Ukuze idivayisi range intengo isabelomali ukusebenza ngempela okuhle. Iyatholakala isithombe kokucindezelwa nezakhiwo - BMP, JPEG, GIF, PNG.
antenna esakhelwe ngaphakathi nangaphandle isikhulumi umsebenzi, etholakalayo efonini ephathekayo Philips Xenium X1560, kusho ukuthi awudingi ukuba zihlale headphones uma ufuna ukulalela umsakazo. Manje ungakwazi ukujabulela omsakazo eziyizintandokazi zakho nganoma isiphi ivolumu, ubalalele kwendlu noma ngaphandle. Kuye isimo semizwa yakho noma izimo ungashintshela kalula imodi wokulalela headphones.
Lolu cingo lusekela ama iphrofayela ye-Bluetooth A2DP. Lokhu kuzokuvumela ukuba ujabulele izingoma eziyizintandokazi zakho kwentambo. Kusukela kudivayisi Philips Xenium X1560 uthola ukulalela izinga okusezingeni stereo umculo ngama-headphone, amisiwe nge-Bluetooth.
MicroSD slot for khadi
Into nice Kuyaphawuleka ukuthi ungakwazi ukwandisa inani lememori yokugcina amafayela multimedia ngokufaka MicroSD imemori khadi embotsheni esakhelwe efonini.
Umakhalekhukhwini Philips Xenium X1560 has izinhlangothi ezilandelayo: ukuphakama - 119,6 mm, nobubanzi - 51,1 mm, ukushuba - 16.3 mm. Idivayisi ukala amagremu 122 kuphela kanye nosayizi compact zikuvumela bawubeke iyiphi ephaketheni. Idivayisi itholakala umbala owodwa kuphela - black. Futhi ifoni yakho ifakwe antenna esakhelwe, futhi injalo isici - candybar.
Philips Xenium Xenium Philips X1560. izici lobuchwepheshe
Kwihendisethi isekela amafomethi ambalwa GPRS uxhumano (Rx Tx +) - Class 12 futhi Class B, kanye GSM at 900, 1800, 1900 MHz. Izakhiwo ukuthumela nokwamukela imiyalezo futhi inikeza ezahlukene - SMS kuhlanganiswe (Long-SMS), i-SMS CB (Zokusakaza), i-SMS (imilayezo yesevisi yomlayezo omfushane), i-SMS multitselevye, MMS, Multimedia Messaging Service. A kungenzeka eminye ukuxhuma kunethiwekhi nge-WAP 2.0. Yiqiniso, Philips Xenium X1560 izici uthobekile, kodwa kuhle kakhulu idivayisi isabelomali.
Amathuba kwidivaysi umsindo imifanekiso nesizotha kakhulu - etholakalayo MP3-Up Polyphony samanje (64 amathoni). Asekelwe nezakhiwo audio: MP3, AMR, Midi, AAC, nakho kungasetshenziswa njengoba ucingo ngoba ucingo. ukuqoshwa efonini umsindo Philips Xenium X1560 (izibuyekezo akhayo) sivivinyo AMR format. Ungarekhoda izwi lakho siqu, umsindo ngempela bha.
Idivayisi isekela format imemori khadi Micro SD, ngomthamo usuwonke okuyinto - 8 GB. UQobo isitoreji isikhala idatha Philips Xenium X1560 has nhlobo.
Igajethi has a Jack embobeni futhi ikuvumela ukuthi usebenzise idivayisi "hands-free '. Iyatholakala lwenethiwekhi engenawaya BluetoothV2.1 format isekela amaphrofayili alandelayo ne-Bluetooth: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP, HFP, HSP, IOPT, OPP.
Uxhumo olunezintambo ingasebenzisa i-USB ikhebula yathumbela kudatha microUSB kusuka ngocingo kwikhompyutha noma enye idivayisi.
umshini ophathwa ngesandla ilawulwa usebenzisa izinkinobho eziphathekayo. Kukhona 4-indlela yekhi bese ufaka ukhiye, futhi inkinobho ye vula / off.
Esikhathini imenyu kukhona ingobo yomlando namakholi angenayo naphumayo, kuhlanganise engaphenduliwe. Kunezinye izilungiselelo ukuze udlulisela phambili izingcingo ezingenayo, ngeke ukwazi ukwenza ngezindlela ezihlukahlukene. Kukhona futhi okulindelwe kukho ucingo, kanye izingcingo eziphuthumayo. Umsindo lapho ikholi kungacinywa noma esikhundleni sawo kufakwe vibration, futhi kulawulwa umthamo yayo. Isibuko ebonisa iwashi digital ekuboniseni isikhathi samanje.
imidlalo esakhelwe ngaphakathi kule inombolo yef. Kukhona izinhlelo zokusebenza olufakwe, abe yisikhumbuzo phakathi, i-ajenda, iwashi le-alamu, wokubala, ikhalenda, ayeke iwashi. Ngenxa izilungiselelo umsebenzisi siqu futhi inikeza ezihlukahlukene Amaskrini saver, yamaphephadonga kanye ukuncenceza. Futhi, idivayisi ifakwe flashlight esakhelwe, okunikeza ukukhanya kuhle.
Okufakwayo kombhalo kungaba kwenziwe njengoba indlela ejwayelekile nezinombolo kanye ngosizo i-T9. Ulimi kungashintshwa ngumsebenzisi. Iyatholakala ongakhetha kuzo isiRashiya, isiNgisi, isi-Romanian nezilimi Ukraine.
Njengoba sekushiwo ngenhla, ifoni has a battery-HeartnocularsEND_BOLDEND_FONT. Ngo-standby mode, ngaphandle lingatshajwa idivayisi uyakwazi ukusebenza ezingaphezu kuka izinyanga ezintathu. Ilungiselelwe ibhethri lithium-ion nge nomthamo 2900 mah.
ikhithi Standard uma uthenga ifoni elandelayo - ishaja, earphone we, ikhebula le-USB ukudlulisa idatha, umhlahlandlela umsebenzisi. Idivayisi kufika ebhokisini amakhadibhodi. Ukuze Philips Xenium X1560 imfundo ke ezinzima elula. It is futhi wayezazisa abasebenzisi.
Izimfanelo ezinhle Philips Xenium X1560
High-amandla webhethri eyehlayo isikhathi eside kanye nezindleko.
usayizi Kunalokho enkulu isihenqo 2.4 amayintshi. Izici kukuhle ngempela, kungcono nje ifoni ngaphandle imisebenzi eyengeziwe.
ukubukeka ekhangayo. Naphezu alula, idivayisi ubukeka yesimanje.
The kungenzeka ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa amakhadi amabili-SIM.
umsebenzi Ikhwalithi uxhumano ezinzile. Izingxoxo zenzeka sisekhaya.
Umqulu isikhali impela high, futhi umsindo ucingo emnandi. Sokudlikiza muhle, kunzima ukuba miss.
Esikhathini kudivayisi imenyu omuhle, okuyinto ayiqukethe izintwana ezingaphezulu. Ayikho ukufinyelela ngqo yokuxhumana, nokunye. D.
Ngayinye othintana kungenzeka ukurekhoda endaweni yomsebenzi, i-imeyili, kanye neminye imininingwane ebalulekile.
Izikhungo ezimeni ezinhlanu nge izilungiselelo ezihlukahlukene ezihlobene imvamisa.
Inkinobho esisogwini isikhungo, zingavumi kakhulu. Ekuphatheni ifoni Philips Xenium X1560 kulula miss, ikakhulukazi umsebenzisi ngeminwe hhayi ngempela mncane.
Idivayisi ine a usayizi elikhulu futhi ukujiya ikakhulukazi ezinkulu. Uma uthi nhlá, idivayisi besiyoba sikhulu kakhulu, kodwa uma kuqhathaniswa ngaphezulu Smartphones eziphambili, lo mehluko is wazizwa ngamagama ashubile.
Azikho izicelo ezihlinzeka ukuvumelanisa kudivayisi yakho nge computer yakho. Mhlawumbe ingqinamba enkulu kakhulu. Ngenxa yalokho, isidingo ukuze uthumele kwenye indawo oxhumana esinakho ukwenza kuphela ngokusebenzisa i-SIM khadi. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuba yakha ibhekhaphu oxhumana nabo - the ukungasebenzi ifoni, yonke idatha egcinwe lapho izolahleka unaphakade.
I telucingo zingavumi kakhulu. Ayikho ikhono ukusindisa izinombolo mobile amaningi oxhumana naye oyedwa. Ivunyelwe ukurekhoda kuphela kuseli eyodwa, omunye ekhaya futhi inombolo eyodwa yebhizinisi. Igama akufanele iqukathe izinhlamvu ezingaphezu kuka amathathu.
Ayikho indlela ukugcina esiningi SMS, kanye uwugcine isikhathi eside. Cishe bonke abasebenzisi uzovuma ukuthi abanye imiyalezo ozidingayo ukuze ulondoloze, kodwa ama-apharathasi echazwe akunakwenzeka.
Ukuze SMS awukwazi ukulungisa oyifunayo isignali umsindo. Kukhona kuphela ukukhetha Preset eziningana amasignali silula.
USB-isixhumi, elise ngezansi, cishe engenamsebenzi. Yiqiniso, ngokusebenzisa ke ungakwazi ukushaja ezinye izinto, kuhlanganise Smartphones, kodwa umkhuba lizokwenziwa abasebenzisi ambalwa. devaysa design sihlinzekela i-plug zenjoloba. Nokho, kancane yona ukubukeka ifoni.
Le divayisi ilungele labo abasebenzisi abadinga kuphela efonini imisebenzi. Kubo kuyoba ukuphila olufanele yebhethri ende kanye nokuntuleka ongakhetha.
Smartphone IUNI U3: incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Ucingo Samsung 3322: imanyuwali yomsebenzisi, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Izinwele ensundu okukhanyayo: izici ukunakekelwa
Ukususwa kwaleso sikhunta kwabiza Pipeline, yokulungisa Good Network
Turkey, Kemer, "Dinopark": ukubuyekezwa kanye incazelo
Onion isobho yokudla. Ukubuyekeza, iresiphi, ukudla imithetho.